Brexit neItaly zvichave zvakanyorwa pamusika wekutengesa svondo rino | Ehupfumi Zvemari
Chibvumirano pakati peEngland neEuropean Union pamusoro pekushandiswa kweBrexit uye mabhajeti akajairika ayo hurumende yeItaly inofanirwa kupa ichave yekugadzirisa zvinhu zvekushanduka kwemisika yemari muvhiki rekupedzisira raNovember. Mukutaura, zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti zvichatanga kubva munzira yekumusoro nekuti zvese zvinoita sekunge matambudziko aya anogona gara nenzira inogutsa kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Mushure mevhiki iro mucherechedzo wenyika, iyo Ibex 35, yakadonha zvishoma kudarika 1,50% muzvikamu zvishanu zvekutengesa.
Kune rimwe divi, vhiki ino indekisi yekuvimba nebhizinesi ichaburitswa IFO yekuGerman uye iyo Eurozone, nepo iyo US ichaburitsa matatu nematanhatu emabhondi emwedzi uye maviri makore manotsi. Iwo achave mamwe akakosha kwazvo ayo anozotara, mune imwe pfungwa kana imwe, iyo nzira ichatora, kwete chete yeSpanish stock stock, asi nyika yese. Uye kuti chero zvakadaro, ichaperekedza mashandisiro emisika yezvemari zvibvumirano zvakakosha zvakurukurwa kumusangano weEuropean Union paBrexit uye wakaitwa kupera kwevhiki rino.
Nepo pane zvinopesana, uye zvine chekuita nehupfumi hweUnited States, maziso ese achanangiswa kune yekugadzira bhizinesi indekisi yeiyo Dallas Fed uye vane fungidziro vanonongedzera kumatanho e105,90 mazinga. Imwe yedhata yakakoshesesa yenzvimbo ino ndeye iyo inoreva kuChicago Fed's national activity index, iyo ichaburitswawo svondo rino. Naizvozvo pane yakawanda data iyo vashoma nevapakati varimimari vanofanirwa kugaya kuti vakwanise kutora chinzvimbo chakanyanya kuita kuti yavo yega zvinhu ibatsirikane.
1 Brexit: inofanirwa kukwidza musika wemasheya
2 Kubvumidzwa kweParamende yeChirungu
3 Solution kudambudziko reItari rinotarisirwa
4 Ngozi yekudonha kukuru
5 Kumirira chipo cheKisimusi
6 Nguva yakanaka yekudyara
Brexit: inofanirwa kukwidza musika wemasheya
Chibvumirano chakasvitswa pakubuda kweBritain kubva kuEuropean Union chinotarisirwa kuve chinonyanya kukonzera masheya muzvikwata zvakachengetwa kukwira mushure mekuderera kwazvino mumwedzi yapfuura. Kwete zvisina maturo, vamwe vevaongorori vanonyanya kukosha mumisika yezvemari vanotaura kuti zvinogona kutanga mukuvandudzika kwechinyakare Krisimasi pati rally. Kunyangwe sekuti vatengesi vezvitoro vanoziva mushe, zvinoitika pamisika yezvemari hazvinyatso fungidzira nekuti zvinowanzo tengwa neguhwa uye kutengeswa panosimbiswa nhau. Zvichava zvakafanana mamiriro mune iyi kesi?
Kune rimwe divi, zvirokwazvo pachave nemamwe masheya anozonyanya kunzwira kune rudzi urwu renhau. Zvese mune imwe pfungwa uye mune imwe, sezvakaitika mumakore achangopfuura. Pane imwe nguva yegore, tariro mumisika yezvemari inogona kunge iri iyo dhinomineta munzvimbo zhinji dzakachengetedzwa. Muchikamu chinotevera vakasiyana vemari vamiririri achasiya kusahadzika, zvese kutenga nekutengesa masheya pamusika wekutengesa. Kana kwangosara mwedzi mumwe chete kusvika kupera kwegore rino rinotambudza kumisika yemari.
Kubvumidzwa kweParamende yeChirungu
Chero zvazvingaitika, dambudziko hombe rekufambira mberi mumisika yemasheya rinoenderana nekutenderwa mune ramangwana kweiyo Paramende yeBritish yemusangano wakaitwa nematare anotonga eEuropean Union. Naizvozvo, hakuzovi nesarudzo asi kuyera mashandiro akaitwa nemazvo. Nekuti zvazviri, maitiro ekutanga emisika yemasheya uyu Muvhuro aive pachena ane hunyanzvi, nekutenda kweIbex 35 kutenderedza 2%. Iwo mabhanga akatungamira kusimuka uku mushure mechirango chakakura chakagashirwa mumavhiki apfuura. Kufambira mberi kweSabadell, BBVA, Bankia kana Santander kwave pamusoro kwakatarwa nemamwe mativi emari inowanwa.
Izvi zvinoitika pamisika yezvemari zvakatungamira kune yakasarudzika index yeSpanish stock market kuve inokatyamadza mazinga e 9.200 points. Kunyangwe mumazuva anotevera kukura kwayo kungave kwakakosha kuratidza kuti ingori rebound-imwe chete kana chimwe chinhu chakanyanya kongiri chinogona kutora iyi renongedzo sosi yemusika wemasheya kumusoro kwakakwirira. Iko imwe yemakuru mareferensi ichave iyo yakasimba rutsigiro iyo ine pa9.500 mapoinzi uye izvo zvinogona kutotungamira kune yakakwira chikamu chemutengo.
Solution kudambudziko reItari rinotarisirwa
Nezve bhajeti yakatumirwa kuBrussels ne hurumende yeItaly, izvozvi zvese zvinoita kunge zvinoratidza kuti izano re transalpine kuzadzisa mamiriro ari nani kutaurirana chikwereti chayo. Nekudaro, mavhiki mashoma achazofanira kupfuura kuti vaone kuti chokwadi cheichi chakasarudzika mamiriro ndechekuti masangano enharaunda ari kupfuura nawo. Kana yakagadziriswa, inogona kuve imwe simba rakasimba remari yekuEurope kuti ibudise imwe yekukwira kumusoro gore risati rapera.
Mumwe wevabatsiri vakakura veiyi mamiriro pasina mubvunzo achave mabhanga anogona kupedza gore zvirinani pane zvavakatanga. Kwete pasina, iyo ndeimwe yemasangano asiya mayuro akawanda mumugwagwa mukati memwedzi iyi ingangosvika gumi nemaviri. Nekuderera mune mamwe masheya indices pamusoro pe10%. Kusvika padanho rekuti ndechimwe chezvikamu mumisika yezvemari ine kurudziro yakaipisisa nevanoongorora zvemari. Netipiki kune yakaderera uremu uye izvo zvakatungamira kukutengesa zvakajeka kupfuura kuyenga.
Ngozi yekudonha kukuru
Chero zvazvingaitika, havazi vese vanoongorora zvemari vane tarisiro yekushanduka kwemusika weSpanish wemusika wemazuva ekupedzisira egore. Asi, zvinopesana, vanofunga kuti iyo Ibex 35 inogona kusvika pamatanho padhuze padhuze neaya ari munguva pfupi iri kutevera. 7.000 kana 7.500 mapoinzi, iyo yaizoisa ichi bhenji mune imwe yeakaderera mumakore apfuura. Nenjodzi yakawedzerwa yekuti iyo yekuderera inogona kuve yakanyanya kusimba kupfuura zvaimbofungidzirwa. Nezve mazwi ese: mapfupi, epakati uye akareba uye kupfuura mamwe maratidziro ehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Kumirira zvinogona kuitika, rimwe rematanho kusvika tarisa kwemazuva mashoma anotevera ndiyo inonyanya kukosha yemapoinzi mazana masere nemazana mashanu. Ndiko chaiko kwaakamira mukudonha kwekupedzisira kwaakasangana nako mumazuva ekutanga aNovember. Nekuti kana ikapfuura, pasina kupokana, kuderera kwezvikamu zveSpanish kunogona kuve kwakanyanya uye kutevedzera mamiriro asina tariro anounzwa nevanoongorora zvemari. Kunyangwe paine chokwadi chekuti mhedzisiro yebhizinesi yekota yekupedzisira haina kunge ichiodza moyo.
Kumirira chipo cheKisimusi
Mukati meichi chirevo chizere, vese varimari vadiki nepakati varimi vakamirira rally inotarisirwa yemazororo eKisimusi kuti ivhu. Izvo zvinowanzoitika kuti zvinoonekwa mazuva ano, asi kwete nguva dzose sezvazvakaitika mugore rapfuura, kukuodza mwoyo kwezviuru nezviuru zvevatengesi vanoda kupinda mumisika yezvemari mukati memazuva ano pamberi peKisimusi. Iko mutengo wemasheya unogona kukosheswa dzakakomberedza avhareji ye8%. Saka hazvishamise, nekudaro, kuti chikamu chikuru chavo chakamirira chitarisiko chavo kuti chiite mashandiro avo nekudaro chinoita kuti kuchengetedza kwacho kubatsire mune pfupi pfupi nguva.
Iko kune zvikamu zvine hukasha zvikuru zvichave izvo zvine kugona kuita kwakanyanya munguva ino yekusimudzira. Kana, zvichikundikana izvo, iwo maitiro akaderera zvakanyanya mukati megore rino. Ndekupi futi mabhanga Ivo vanoita chinzvimbo chakasimba mukutungamira iko kuwedzera uye kudzikisa dhisikaundi ivo varikutengesa parizvino zvishoma. Kune rimwe divi, hunyanzvi hwetekinoroji ndevamwe vane mavhoti ekuratidza kufambira mberi kwakakura mumutengo wavo. Kukuvadza makambani anozvidzivirira uye vese avo vanoita senzvimbo dzakachengeteka dzimwe nguva dzekusagadzikana kukuru mumisika yemari.
Nguva yakanaka yekudyara
Nekudaro, Zvita naNdira vagara vanga vari mwedzi miviri yakanaka kwazvo kumisika yemari. Ichi chinhu icho chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati vanovimba kupedzisa gore zvakanaka. Kunyangwe hausi mutemo wakatemwa kuti zvinogara zvichizadzikiswa uye ichi chinhu chaunofanira kufunga nezvacho kuti urege kutora kusagutsikana kubva zvino zvichienda mberi.
Mune rimwe remakore akaomesesa ekushambadzira kwemasheya epasi rese mumakumi emakore apfuura. Iko iyo Ibex 35 ingangoperera pamwe neaviri-manhamba ekuderera. Kunyangwe pasina kushaikwa kwevaongorori vemusika vanofunga kuti mushure mekosi isina kunaka seiyi, inoteverwa nekuwongorora kwakakura mukuyera kwemitengo yemasheya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Brexit neItaly zvichaenda kuruzhinji svondo rino
Maternity rubatsiro kuSpain